शुद्ध न्यायालय भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न बारको आन्दोलन
लीलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरुञ्जेलसम्म अदालत सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलन निष्प्रभावी छैन ।
विडम्बना ! भोलि न्यायालयका विचौलियाले विचौलियाको काम गर्न, खुवाउन र खान पाउनुपर्छ भनेर नारा-जुलुस गर्न सक्छन् । किनभने अदालत सुधारका लागि आन्दोलन गर्ने बारबाहेक छैनन् कोही ।
बारले आन्दोलन गरिरहँदा दल र दलका नेताहरूले चासो पनि दिएका छैनन् । नदिनुलाई यो मुलुक ‘फेलर स्टेट’तर्फ जाँदै छ भन्ने संकेतको रूपमा बुझिनुपर्छ ।
र, भ्रष्टाचारीहरूले यो मुलुक चलाउँदै छन् । जसको शक्ति र पहुँज छ, उसले मात्रै न्याय पाउने, लुट्न पाउने स्थिति छ । यस्तै रहे आम नागरिकले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू पनि उपभोग गर्न नपाउने विडम्वनापूर्ण स्थिति आउन सक्छ ।
त्यसले गर्दा दल, सरकार, विद्वत वर्ग र सभ्रान्त वर्गले सामान्य रूपमा बारले जारी राखेको अदालत सुधारको आन्दोलनलाई लिन्छन् भने खतराको प्रष्ट संकेत हो । मुलुक दुर्घटनातर्फ जाँदै छ भन्ने संकेत पनि हो ।
बारले त राज्यको हरेक अंगमा भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन, अझ न्यायापालिकामा त रक्तिभर पनि हुनुहुँदैन भन्दै आएको छ । सोही कारण, बारको नेतृत्वमा न्यायालय सुधारको आन्दोलन भइरहेको हो ।
आन्दोलनमा परिमाणको आधारले सहभागिता कम होला (पार्टीहरूको महाधिवेशनलगायत कारणले) तर गुणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने आन्दोलनमा कहीँनेर खोट छैन । बारको ९० वटै इकाइले आन्दोलनको अपनत्व ग्रहण गरेका छन् ।
दुःखलाग्दो चाहिँ के छ भने मुलुक भ्रष्टीकरणतर्फ अगाडि बढेको आभाश भएको छ । पदमा हुने र शक्तिमा हुनेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
त्यही भएर न्यायालय सुधार गर्नुपर्छ । सुधारका लागि बाधक बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ । जबराको नेतृत्वमा न्यायालय सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन ।
यस्तै बुँदाहरू उल्लेखित ध्यानाकर्षण पत्र दलहरूलाई बुझाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बुझायौँ र भनेका छौँ कि उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) को नेतृत्वमा न्यायालयमा सुधार हुन सक्दैन । नहुने आधारहरू यी हुन् भनेर पनि हामीले भन्यौँ । तर, कुनै कदम चालिएको छैन । नचालिनुलाई कसरी लिने ?
के उहाँहरूको पनि कतै न कतै विचौलिया र भ्रष्टाचारीहरूसँग सम्बन्ध छ ? अनुमान गर्ने अवस्था त भयो । तर, यति भन्दैगर्दा मलाई अझै पनि विश्वास छ कि राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकारले केही न केही कदम चाल्नुहुन्छ ।
र, मैले यहाँ भन्छु कि सरकारको अरु निकायमा भ्रष्टाचार भयो भने मुद्दामार्फत् आदेशबाट वा फैसलाबाट ‘करेक्सन’ हुने ठाउँ रहन्छ । न्यायपालिकाभित्र भयो भने त्यसविरुद्ध बोल्ने भनेको बार एसोसिएसनले मात्रै हो ।
यद्यपि, सरकारको पनि स्थायी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छ बार । सरकार (कार्यपालिका), न्यायपालिका र संसद (व्यवस्थापिका) लगायत हरेक सार्वजनिक निकायको कामबारेमा बार निगरानीकर्ताको रूपमा रहेर हेरिरहेको हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिका हाम्रो घर हो । न्यायापालिकामा काम गर्ने न्यायाधीशहरू र कर्मचारीहरू भनेका अस्थायी हुन् । अर्थात् ६३ बर्से, ६५ बर्से या ५८ बर्से उमेर हदले उनीहरू विदा हुन्छन् । तर, हामी कानुन व्यवसायीहरू कहिल्यै ‘रिटायर्ड’ हुँदैनौँ । ९७ बर्से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि लठ्ठी टेकेर अदालत सुधारको आन्दोलनमा आउनु भएको छ । भनेपछि यो अदालतको सुधारका लागि अरुलाई भन्दा पनि हामीलाई बढ्दा चासो हुन्छ । चिन्ता हुन्छ । त्यसकारण बार आन्दोलित छ ।
तर, राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले न्यायालयमा अहिले देखिएको समस्याको दीर्घकालीन असर बुझ्नु भएको छैन । खाली न्यायपालिकाभित्र वकिल र न्यायाधीशबीचको मात्रै कुरा हो भन्ने ठान्नु भएको होला । यो समस्या त आम नागरिकको समस्या हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समस्या हो । समग्रमा भन्दा देशको समस्या हो ।
देशको जल्दोबल्दो यो समस्यामा संविधानले पनि चिनेको नेपाल बार, जहाँ २० औँ हजार कानुन व्यवसायी छन्, यसले प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, विचौलियाजस्ता विकृति विसंगतिसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाइरहँदा नदेखे जस्तो गर्ने र नसुने जस्तो गर्ने देखियो । यो उहाँहरूको अकर्मणियता हो । र, यो विषय हामी संसदमा जसरी प्रवेश गराउँछौँ । सांसदहरूसँग हामीले ‘लबिङ’ गरिरहेका छौँ ।
सांसदहरूलाई महाअभियोगको सन्दर्भमा कहीँ पनि ह्वीप लाग्दैन । नेपालमा पनि लाग्दैन । त्यो हुनाले अझै पनि हामीलाई विश्वास छ, सांसदहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ । त्यसो गर्नु भएन भने पनि बारले भविष्यको सन्ततिका लागि शुद्ध न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्न चाहेको छ । आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनको रुपरेखा छ । प्रतिवेदन तयार छ । कम्तीमा न्यायपालिका शुद्ध छ, न्यायपालिकामा गइसकेपछि कसैले पनि अन्याय भोग्नुपर्दैन र त्यहाँभित्र अनेक खेलोफड्को हुँदैन भन्ने सन्देश भोलिका पुस्तालाई दिने गरी आन्दोलनमा हुन्छौँ ।
पौडेलसँग फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानी ।
प्रकाशित मिति : माघ १, २०७८ शनिबार १६:५१:४१, अन्तिम अपडेट : माघ १, २०७८ शनिबार १६:५४:२१